Vatican Museum inozivisa Rooms dzaRafael
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Vatican Museum inozivisa Rooms dzaRafael
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • dzidzo • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Vatican Breaking Nhau
Vatican Museum yakavhura mikova yemakamuri matatu (kubva mana) emakamuri aRaphael kune yakasarudzika vatori venhau nevashanyi vakakosha kuyemura kudzoserwa kwemakamuri ayo pakutanga aive pekugara pakavanzika kwaPapa Julius II.
Kuvapo kwaPurofesa Christoph Litpold Frommel, Munyori weimwe yazvino bhuku rehunyanzvi "Iyo Stanze di Raffaello," yakapihwa seyotarisa, yaive bhonasi yakawedzerwa yechiitiko chakakosha. Mme Barbara Jatta, director weVictoria Museum akaunza basa raProf. Frommel, achiteverwa nezvakataurwa naProfesa Ms Stefania Pasti naProfesa Claudio Castelletti.
Prof. Christoph Litpold Frommel, Mme Barbara Jatta naProf Stefania Pasti
Imba yechina, ichiri kudzoreredzwa, ichave yakagadzirira muna 2020. Makamuri mana achange akavhurwa veruzhinji muna2020 pachiitiko chemhemberero yegore negore yaMambo Constantin uye akatumidzwa kuti "Makamuri aRaphael" kukwezva vashanyi veVictoria Museum uye sanganisira ivo kushanyo yeSistine Chapel.
Muna 1508 Papa Julius II, ipapo pakukwirira kwekubwinya kwake, akaita kuti Sistine Chapel yakashongedzwa naMichelangelo nedzimba dzake dzakavanzika naRafael, achingoona mumakore mashoma maviri emabasa makuru kwazvo munhoroondo yese yeunyanzvi. Nepo Michelangelo akatarisa pakusikwa kwemunhu, Raphael akaburitsa iyo Stanza della Segnatura (dare repamusoro repapa) tsika huru yeMediterranean, kubva kuna Homer kusvika panguva yake.
Kuvhurwa kwekutenderera kwemafresco iSakaramende Yakaropafadzwa, iyo inoperekedza isu paParnassus, uye inosvitsa Chikoro cheAtene, uko kunowanwa mitemo nezvakavanzika zvezvinhu zvese, uye kutenderera kwacho kunopedzisa nemufananidzo wemuparamende Pope.
Dambudziko rakakomba, rezvematongerwo enyika neepamoyo, rakatarisana naJulius II, rinopa iro Kamuri raHeliodorus rekupedzisira mune zvemweya, hwepedyo uye hunhu. Mukufamba kwenguva kwemazana emakore, papairi anotungamirwa kutembere yeJerusarema. Zvinozoitiswa munguva yepakati peBolsena (dunhu riri padyo neRome) nekuti rinofanirwa kugutsikana nezvakavanzika zvekutenda. Anozvizivisa naLeo Mukuru uyo ​​anoramba Attila uye, mwedzi mishoma asati afa, mutumwa anomusunungura kubva mutirongo repasi.
Akasarudzwa munaKurume 1513, iye Pope mutsva, mudiki Leo X, akaraira Raphael kuFresco iyo Fire Kamuri. Asi anomiririrwa semuyananisi nerutsva Aeneas, semuvambi weRome, anokunda kurwa nevasina kutendeka, anoisa korona yeumambo pamusoro waCarlo Magno (Franco-Lombard mambo, mambo weHutsvene hweRoma Humambo) nekurwa kubvisa zvese zvaaipomerwa.
Muna 1519 Raphael anogadzirira kutenderera kwaConstantine kunaPope, asi anopfuura, achienda achisiya basa risina kupera. Iri vhoriyamu raPurofesa CLFrommel anotiperekedza parwendo kuburikidza nemakamuri achangodzoreredzwa mukubwinya kwawo kwekutanga. Chinyorwa chinotevera hunyanzvi, chinoratidza chinangwa chemabasa, icho chinoratidza tsika yeRenaissance nemapapa ayo.
Christoph Litpold Frommel (Heidelberg, 1933) aive purofesa paYunivhesiti yeCalifornia, Berkeley. Kubva 1980 kusvika 2001 aive director weHertziana Library yeRome (Max Planck-Institut). Pakati pa2002 na2005 aive purofesa anozivikanwa paUniversity yeRome uye akahwina degree rekukudza kubva kuYunivhesiti yeNaples Federico II. Iye ndiye Mukuru Mukuru weiyo Italian Republic, iyo Borghese Prize, iyo Academician yeLincei, yeBritish Academy uye iyo Academy yeSan Luca; anga ari nhengo yeDare Rakakwirira reCultural Heritage yeInstitute neMaraibhurari uye mu2011 akagamuchira mubairo weCultori di Roma.